Shiinaha Tusmada iyo ahmiyada uu leeyahay magaca warshadeynta | Soo-saaraha WEIHUA iyo Alaab-qeybiye | Weihua
Sigaarka Elektaroonigga ah
Hard disk qolof leh + taageerada kumbuyuutarka
Calaamadeynta Magaca 'Stamping'
saxarada alum (saxan naxaas ah) + daabac + shaabad
Saxuunta Alum + shaambada + CD hadhuudhka + anodi kara
Alum zinc alloy diecast + galvanize + rinji
Alum + jumlad qabow + rinji (anodize) + hadhuudh
Qaybaha daabacaadda PC PET
steel + copper + etching + rinjiyeynta + electroforming
Stamping Stamping (Kala Hortagga CNC)
Alum + CNC + Caanood
Alum + Lathe + CNC + Caanood
Alum + Stamb Forging + cnc + Caanood
Duubista indhaha ah + Goynta PVD + Fidinta
Cuts Die Metal
Aqoonta fidinta Aluminium
Habka Naqshadeynta Magaca
Nuxurka iyo ahmiyada uu leeyahay magaca warshadeynta | WEIHUA
Magaca warshadaha guud ahaan waxaa loola jeedaa calaamadda go'an ee alaabta ka dib marka sheyga la dhigo suuqa, kaas oo siiya dadka isticmaala macluumaad sida aqoonsiga sumadda soo saaraha, kala duwanaanta astaanta, iyo xusuusta halbeegga sheyga.
Magaca warshadaha waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu duubo qaar ka mid ah macluumaadka farsamada ee soo saaraha iyo xaaladaha shaqada ee lagu qiimeeyay, si loogu isticmaalo si sax ah iyadoo aan waxyeello loo geysan qalabka.
Qalabka samaynta magacyada warshaduhu waa magaca aalado bir ahiyo kuwa aan birta ahayn: astaamaha birta waxaa ka mid ah zinc alloy, copper, iron, aluminium, steel ahama, iwm, laakiin aluminium ayaa inta badan loo isticmaalaa wax soo saarka, maxaa yeelay magacyada la soo saaray ee lagu farsameeyo ayaa aad u sarreeya - heer sare ah, waara, oo aan miridhku ka madhnayn.Ma aha - caag macdan ah, loox dabiici ah oo loox leh, PVC, PC, warqad, iyo wixii la mid ah.
Codsiyada ku saabsan alaabada iyo qalabka korontada, shaashadda warshadaha waxaa ku jira macluumaad guud oo alaab ah iyo baahiyo farsamo oo gaar ah.
Maxay ka kooban tahay magaca birta warshadaha?
1. Magaca magacu waa inuu ahaadaa mid dhameystiran oo nadiif ah, mana ahan inuu jiro istaroog maqan. Cirifka magaca baalalku waa mid siman oo aan lahayn gees gees leh;
2. Magaca xaraashka waa inuu ka kooban yahay macluumaad sida magaca sheyga, moodeelka, xuduudaha korantada, xuduudaha, calaamadda, lambarka shahaadada, taariikhda la keenayo, lambarka shahaadada iyo soo saaraha;
3. Macluumaadka digniinta ah ee daruuriga ah waa in lagu qoraa magaca magaca, sida "Waa mamnuuc in si furan lagu furo daboolka korontada", "Charging and discharment in the place-not proof Qarax", iwm.
Waraaqaha magaca warshadaha ayaa lagama maarmaan u ah macluumaadka soo socda
1. Logo Waxay u oggolaaneysaa isticmaaleyaasha iyo rakibayaasha inay si deg deg ah u fahmaan nooca badeecada, gaaska / boodhka iyo kooxaha heerkulka u dhigma.
2. Lambarka shahaadada Shahaadada ka tarjumeysa sheyga waa run oo waxtar leh, iska ilaali inaad doorato shey been abuur ah oo liita.
3. Taariikhda warshada.Waxaan si dhakhso leh u ogaan karnaa nolosha adeegga badeecada, waxaanuna xukumi karnaa inaad ka beddeleyso dufcadaha cusub ee badeecooyinka meertada nolosha. Iska ilaali waxqabadka waxqabadka sababtoo ah isticmaalka muddada-dheer. daxalka, gabowga daweynta gabowga ma gaari karo saameynta wax lagu xiro.
4. Farriimaha digniinta ah. U oggolow dayactirka iyo adeegsiga shaqaalaha si looga fogaado hawlgal aan habboonayn oo ay sababaan burburka qalabka.
Isku soo wada duuboo, magaca birta ah ee alaabada warshaduhu waa astaan ​​aad muhiim u ah, macluumaadka aan dhammaystirnayn ama khaldanina wuxuu u horseedi doonaa dhibaatooyin aan loo baahnayn goobta isticmaalka iyo adeegsadayaasha.
Si aad wax badan uga ogaato astaamaha birta , magaca shaqsiga, iwm, fadlan wac Weihua Technology. Waxaan haynaa koox tayo sare leh, tayo sare leh, iyo koox horumarineed oo injineernimo hal abuur leh oo si buuxda u dabooli karta baahiyahaaga.
Waqtiga boostada: Nofeembar-14-2020
Ku Saabsan Diirada
Naga Soo Soco
Huizhou Weihua Technology Co., Ltd. © Xuquuqda daabacaadda - 2019-2021: Dhammaan Xuquuqda Aad Leedahay.
Hot Products - Sitemap - amp Mobile sax qaaradda jediyay , saxan dhiman iyo stamping, oo ildheer oo sax iyo pvt.ltd jediyay , CNC machining qaybo sax ,